Ilungelo lomtshutshisi ukuchasa ukungathathi hlangothi kwakhe - uRabi uMichael Avraham
Ilungelo lomtshutshisi lokuchasa ukungathathi cala kwakhe
Iimpendulo > Udidi: Halacha > Ilungelo lomtshutshisi lokuchasa ukungathathi cala kwakhe
ukugcoba Ubuzwe kwiinyanga ezi-3 ezidlulileyo
Ngokucacileyo, ukuba kukho i-mitzvah yokuba wonke umntu athintele umtshutshisi, ngoko kukho i-mitzvah yokuba umtshutshisi ngokwakhe angachasi ukungathathi hlangothi? Okanye ngaba umtshutshisi usenalo ilungelo lokuchasa ukungathathi hlangothi (kwaye kwade kwafikelela kwinqanaba lokubulala i-neutralizer)? Kubonakala kum ukuba akukho kubhekiswa kule nto kwiMishnah Torah imithetho yoMbulali kunye nokuGcinwa koMphefumlo, iSahluko A.
Iithegi zombuzo: umsukela
Lo mcimbi uvela kwiimvumi. IGemara ithi ukuba wayebhukuqile waza wambulala uPinchas kwimeko eyayimtshutshisa ngewayekhululwe. Kwaye kuMalam F.A. Mahal umbulali uxoxa ngezongezo zalo mthetho (kuthekani ngombulali obulala ngengozi obulala umsindisi wegazi, kwaye lowo ubulala umthunywa kwivesi yesibini kufuneka kuxoxwe ngayo).
Umtshutshisi akanalungelo lokuchasa ukungathathi cala kanye njengokuba engenalo ilungelo lokubulala. Enyanisweni yena ngokwakhe kwafuneka azibulale kwimo yokutshutshisa (okanye ngokuqinisekileyo ayeke ukutshutshisa). Le yindlela endiwuchaze ngayo apha kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo umthetho wokuba kumthunywa eBD akukho mvume yokumbulala kuba ummangalelwa kufuneka azibulale ngokwakhe. Ukubulala izaphuli-mthetho yi-mitzvah ebekwe eluntwini, kwaye umthunywa we-B'D ungumthunywa wabo bonke (kubandakanywa nabo batshutshiswayo).